Kalfadhigii ururka Isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed ee Sweden 2005
Ururka Ibahaysig umadda Soomaaliyeed ee Iswiidhan oo ah dallad ay ku kulmaan jaaliyadaha soomaaliyeed ee ka jira dacallada wadanka Sweden ayaa kalfadhigiisii sanadlaha ahaa ku qabsaday magaalada Stockholm ee caasimadda Sweden. Shirka waxaa ka soo qayb galay dad kor u dhaafay 100 qof oo isugu jiray wakiilada urur xubneedyada, wakiilada odayaasha golaha dhexe, guddiyada kala duwan ee ururka iyo xubno marti dharaf ah.
Ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed waxaa la aasasay 1995, waxaana lahaa fikradda aasaaska iyo abaabulkaba caalimka weyn ee Soomaaliyeed, Sh Cumar Faaruuq oo waagaas ku noolaa dalka Sweden. Sheekhu wuxuu berigaas ku aasaasay ururka nadaam ku meel gaadh ahaa oo ku salaysnaa beelo. Maanta ururka Isbahaysigu waa mid ka jira wadanka sweden oo dhan, kana baxay nadaamkii beelaha ee lagu dhisay, isaga oo u gudbay nadaam urur xubneedyo ah.
Urur xubneedyada rasmiga ah ee isbahaysigu waxay hadda yihiin 60 urur oo ku kala baahsan dalka kuna kala foogan adeegyo iyo hawlo kala duwan oo ay ka mid yihiin:
· Xoojinta dhaqanka ummadda Soomaaliyeed
· Afka hooyo
· Dugsiyo caruureedyo
· Samofal wadankii ah
· Kobcinta aqoonta xubnaha
· Raadinta xuquuqda dadka Soomaaliyeed iwm.
Ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed wuxuu sanadkiiba hal mar qabtaa shirweyne ay ku kulmaan wakiilada urur xubneedyada iyo wakiilada odayaashu. Shir sanadeedkaas oo lagu magacaabo ”kalfadhi”, waxaa laysku waydaarsadaa warbixino kala duwan oo ku saabsan waayaha umadda soomaaliyeed ee Sweden iyo aduunkaba. Maamulka ururkuna wuxuu ku soo bandhigaa si loo ansixiyo waxqabadkii sanadkii tegey iyo qorshaha ay ku talogaleen sanadka soo socda. Labadii kalfadhiba mid ahaan ayaa lagu doortaa maamulka ururka oo ka kooban:
· Guddiga fulinta 2 sano
· Guddiga hantidhawrka 2 sano
· Guddiga soo diyaarinta doorashada 2 sano
· Guddiga hawlwadeenka golaha dhexe 1 sano. (guddigan sanad walba waa la doortaa).
Haddaba kalfadhiga sanadkan 2005 muu ahayn sanad doorasho ee wuxuu ahaa kalfadhi caadi ah oo lagu ansixinayey qorshaha sanadka soo socda iyo waxqabadka sanadkii tegey. Haddii laga tegi waayo waxaa la dooranayey guddiga hawlwadeenka golaha dhexe iyo xubno ka bannaanaaday guddiga fulinta ururka.
Waxaa jirtay in guddoomiyihii ururka Isbahaysiga loo doortay sanadkii 2004 uu iska casilay xilkiisii bishii okt 2004. Sidaas darteed waxaa kalfadhigan lagu doortay guddoomiye cusub. Guddoomiyaha cusub ee la doortay oo loogu codeeyey si aan kala hadh lahayn waxaa loo doortay mudane Cabdulqaadir Makaraan oo hore u hayey jagada xoghaynta guud ee Isbahaysiga. Jagadii xoghaynta guud ee ururkana waxaa loo doortay mudane Cabdibashir (Maxamed Xirsi) oo hore ugu magacwnaa xoghaynta warfaafinta isla markaana joogay xafiiska ururka. Jagadii warfaafinta ururkana waxaa loo doortay mudane Cabdulqaadir Salaad (Loonge).
Sidoo kale wuxuu shirku dib u doortay guddigii hawlwadeenka golaha dhexe ee hore u jirtay oo ka koobnaa todoba xubnood oo kala ah:
1. Mustafa Maxamed Diini
2. Ibraahim Cumaan Buraale
3. Maxamuud Sh. Dhoore
4. Khaliif Maxamed Xaaji
5. Suldaan Maxamed Suldaan Garyare
6. Yaasiin Maaxi Macallin
7. Bashiir Cabdulle Cusmaan
Doorashooyinka ka sokow waxaa shirka lagu soo qaaday arrimo badan oo dhaliyey dood iyo talooyin lagu ballamay. Waxaa laga hadlay sidii samafalka Sweden ee geyigii soomaaliyeed loo xoojin lahaa. Waxaa laga hadlay sidii cudurka musuqmaasuqa bulshada, Soomaaliyeed looga gaadhi lahaa. Waxaa laga hadlay khatarta qaadka iyo halista tubaakada oo gurmad u baahan. Waxaa laga hadlay sidii sumacadda umadda soomaaliyeed ee Sweden loo difaaci lahaa.
Kalfadhigu wuxuu ku soo gebogeboobay si wanaagsan oo farxad leh. Waxaana hogaaminta iyo isku xidhka ummadda Soomaaliyeed looga tegey xubnaha guddiga fulinta oo uu horkacayo guddoomiyaha cusub. Waxaanay kala yihiin xubnaha guddiga fulinta ee isbahaysigu:
Cabdulqaadir Maxamed Nuur (Makaraan) Guddoomiye
Cabdi-Mahdi A. Warsame G/ku xigeen
Xuseen Salaad Khasnaji
Maxamed Xirsi (Cabdibashir) Xoghaye
Maxamed ciise Arrimaha Bulshada
Yuusuf Maxamed Kulmiye Dhalinyarada & Sportiga
Maxamed Siciid Sh cali Waxbarashada
Khadiijo Maxamuud Arrimaha dhaqanka
Cabdulqaadir Salaad (loonge) Warfaafinta
Maxamuud Dayib Xuseen Xiriirka Ururrada
Sacdiyo Cabdullaahi Xirsi Haweenka iyo carruurta
Maxamed xirsi (Cabdibashir)
Xoghayaha guud ee Isbahaysiga Soomaaliyeed
+ 46-8-166961 (xafiiska)